ကျွန်တော်တို့၏ကုမ္ပဏီကို1962ခုနှစ်မှစတင်၍တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။အကျိုးတူစီးပွားဖက်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများနှင့်လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ တောင်းဆိုမှုလိုအပ်ချက်များသည် ခေတ်ကာလ ရေစီးကြောင်းပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ လိုက်လျောညီထွေစွာပြောင်းလဲလာခဲ့ပါသည်။
လုပ်ငန်းကြီး(3)မျိုးကို အဓိကလုပ်ကိုင်၍ အကျိုးတူဖက်ဆက်ရှယ်ယာလုပ်ငန်းကြီးများနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(1) စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးသောဓာတုဗေဒစက်မှုဆေးဝါးပစ္စည်းရောင်းဝယ် ခြင်း။ ရီဆိုင်ကယ်ဆေးဝါး ပစ္စည်း၊ တိုးကိုင်း (ဂျပန် အရှေ့ပိုင်း ပင်လယ်ဒေသ) (No.1)
(2) ရေဆိုးရေညစ်များကိုပြန်လည်သန့်စင်ပေးခြင်းကိုအဓိကထားလုပ်ဆောင်၍ (ရေသန့်စင်ဆေး)နှင့်ဆက်နွယ်သောစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်း (အစုရှယ်ယာNo1)
(3) (3) ကားအရောင်းအ၀ယ်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း (ဒေသတွင်း No.1 ကိုရည်ရွယ်၍ လုပ်ဆောင် နေပါသည်။)
အထက်ပါအဓိက လုပ်ငန်းကြီး(3) ခုက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည့်အပြင် ၎င်းအကျိုးတူ ဖက်ဆက် လုပ်ငန်းများသည် ကယ်မီကယ်ပစ္စည်း၊ အဆောက်အအုံသုံးပစ္စည်း၊ သံထည်စတီးပစ္စည်း၊ စက္ကူသုံး ပစ္စည်း၊ ကားပစ္စည်း၊ အစားအသောက်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ် ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်း၊ ချည်ထည်ပစ္စည်း ဖိုက်ဘာသုံးပစ္စည်း အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုးသော ကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများ ကျယ်ပြန့် လာလျှက် ရှိပါသည်။ ယခုလက်ရှိ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအနေဖြင့် ကားပစ္စည်းစက်ရုံကို စက်ရုံအသစ်ချဲ့ထွင် တည်ဆောက် လုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီအမည်: Mitani Kogyo Co., Ltd.
ကိုယ်စားလှယ်ပြုသူ: ကြီးကြပ်တည်ထောင်သူဥက္ကဋ္ဌ Mitani Michiro
တည်ထောင်သည့်နှစ်: 1962 ခုနှစ် 11 လ (ဟဲအိဝ ဂျပန်သက္ကရာဇ် 37 ခုနှစ်)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေ: သိန်း 3000 ယန်း
အကျိုးတူအစုရှယ်ယာကုမ္ပဏီ: MT AquaPolymer, Inc., Oji Paper Co., Ltd., Oji F-Tex Co., Ltd., Oji Materia Co., Ltd., Omi Mining Co., Ltd., Kawai Lime Co., Ltd., Kawasaki Heavy Industries Ltd., Kyokuyo Co., Ltd., Kuraray Co., Ltd., KOWA Kogyosyo Co., Ltd., Suzuki Motor Corporation, Daiseki Co., Ltd., Taihei Chemical Industrial Co., Ltd., Taiheiyo Cement Corporation, Taki Chemical Co., Ltd., Denso Corporation, Toagosei Co., Ltd., Toa Business Associates, Dupont-Toray Co., Ltd., Toshiba Corporation, Toyota Motor Corporation, Nippon Aqua Co., Ltd., Mitsubishi Fuso Truck and Bus Co., Ltd.
နှစ်ပေါင်းများစွာ စီစစ် စစ်ဆေး၍ သုတေသနပြုလုပ်၍ ရရှိလာသော ရလာဒ်ကို အခြေခံ၍ စက်မှုလုပ်ငန်းဆေးဝါးပစ္စည်းနှင့်တကွ ရီဆိုင်ကယ်အဖြစ်ပြန်လည်အသုံးပြု၍ ရသောဆေးများကို ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုကို သက်သာစေ၍ အထူးချိုသာသော ဈေးနှုန်း ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် လူဘောင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကမ္ဘာမြေကြီးကို အထောက်အကဲူပြုလျက်ရှိပါသည်။
ရေဆိုးရေညစ်များကိုပြန်လည်သန့်စင်ပေးခြင်းကိုအဓိကထား၍ထုတ်လုပ်ထားသော( ရေသန့်စင် ဆေး) ရေညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့်သန့်စင်ပေးသော ဓာတုပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ် လျက်ရှိပါသည်။ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ လုံခြုံစိတ်ချရခြင်းအပြင် အထူးချိုသာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အထောက်အကူပြုလျက်ရှိပါသည်။
ပစ္စည်းဖြန့်ချိရေးကုမ္ပဏီ၊အစုရှယ်ယာဝင်ကုမ္ပဏီအလုံးစုံသော ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း များတွင်အသုံးပြုသည့်ကားများကို ပြုပြင်ထိန်းသိန်းမှုကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျစွာ မြင့်မားသော နည်းပညာများဖြင့် အထောက်ပံ့ပြုလျက်ရှိပါသည်။ ကားအမျိုးအစားအလိုက် မည်သည့်ကား အမျိုးအစားကိုမဆို customer စိတ်ကြိုက် ပြုပြင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကားကုမ္ပဏီ အမျိုး အစားအလိုက် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်း ပေးခြင်းလုပ်ငန်း၊ စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း ၊ ကားပိန့်ခြင်း၊ ချိုင့်ခြင်း များကို လှပသေသပ်စွာ ဆေးမှုတ် ခြင်းများကိုလဲ လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
1960 ခုနှစ်： Mitani Shokai Co.,Ltd. ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
1962 ခုနှစ်： Mitani Kogyo Ltd.
1966 ခုနှစ်： Mitani Kogyo Co., Ltd. မော်တော်ကား ပြုပြင်၊ ပြင်ဆင်ရေးစက်ရုံ
1972 ခုနှစ်： Kasugai City ရေသန့်စင်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံ
1973 ခုနှစ်： Toagosei Co.,Ltd ဓာတုဗေဒပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း Nagoya စက်ရုံရှိ Toa Seibi အမည်ဖြင့် မော်တော်ကားပြုပြင်၊ ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းကို ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
1983 ခုနှစ်： Kasugai စက်ရုံရှိရုံးခန်းနှင့်တကွစစ်ဆေး စမ်းသပ်ခန်း ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
1985 ခုနှစ်： ပင်မရုံးချုပ်ကို Nagoya Nakaku Sakae တွင်ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
2009 ခုနှစ်： ပင်မရုံးချုပ်ကို Nagoya Nakaku Nishiki တွင်ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
2011 ခုနှစ်： Kasugai စက်ရုံတွင် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းသိုလှောင်ကန် ကိုတည် ဆောက်ခဲ့ပါသည်။
2018 ခုနှစ်： Kasugai စက်ရုံတွင် ဓာတုဗေဒ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
2018 ခုနှစ်： ပင်မရုံးကို နေရာချဲ့ထွင်ရန်အတွက် နေရာကို ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ် ထားပါသည်။
2019 ခုနှစ်：ိုင်ငံခြားသား ရုံးဝန်ထမ်းများကိုခန့်အပ်ထားခြင်းများ စတင် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
本社 : 〒460-0003
TEL : 052(201)3311
© MITANIKOGYO co.,ltd. All Rights Reserved.